Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) - Hello Sayarwon
Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) ကဘာလဲ။
ဇက်နာခြင်းဟာ လူတိုင်းဘဝမှာ အနည်းဆုံးတစ်ခါလောက်တော့ တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုပါ။ အားကစားလုပ်စဉ်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်စဉ်၊ အလုပ်လုပ်စဉ် စသည်ဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လည်ပင်းကြွက်သားထိခိုက်နာကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ တချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လည်း ဇက်နာနိုင်ပြီး ရောဂါကြီးတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာအနေနဲ့ ဇက်နာတာမျိုးတော့ရှားပါတယ်။
Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အလွန်ကိုအဖြစ်များပြီး အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေတွေကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ အသေးစိတ်အတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဇက်နာခြင်း – ကားမောင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့ ခေါင်းကိုတစ်နေရာထဲအချိန်ကြာထားပါက ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
လက်၊ ခြေထောက်တို့ဆီသို့ ပျံ့သွားလျှင်
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း တို့ဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်ပြသင့်ပါတယ်။
Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကြွက်သားများအားစိုက်ရခြင်း – ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်း စသည်တို့ကိုအချိန်ကြာငုံ့ကြည့်၊ ကုန်းကြည့်ခြင်း။ မြင့်လွန်းသော သို့ နိမ့်လွန်းသော ခေါင်းအုံးနှင့်အိပ်ခြင်း။
ထိခိုက်မိခြင်း – ရုတ်တရတ်ခေါင်းရှေ့နောက် ဆောင့်မိသောအခါ တစ်သျူးပျော့များကိုထိခိုက်သွားစေသောကြောင့် ဇက်နာတတ်ပါတယ်။
အဆစ်များထိခိုက်ခြင်း – အဆစ်ရောင်ရောဂါတွေမှာ အရိုးနှစ်ခု(ကျောရိုးဆစ်နှစ်ခု) ကြားရှိ အရိုးနုများထိခိုက်ယိုယွင်းပြီး အဆစ်များလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေကာ နာကျင်စေပါတယ်။
အာရုံကြောပိခြင်း – လည်ချောင်းရိုးဆစ်နှစ်ခုကြားတွင် ကျွံထွက်နေသော အရိုးပြားများ အရိုးစွန်းများမှ အာရုံကြောမကြီး အခက်အလက်များကိုသွားဖိတတ်ပါတယ်။
ရောဂါများ – အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါများ၊ ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင်ခြင်း၊ တုပ်ကွေး နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်လည်း ဇက်နာခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသက်အရွယ် – တခြားအရိုးအဆစ်များကဲ့သို့ပင် လည်ပင်းရိုးများသည်လည်း အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ယိုယွင်းလာနိုင်ပါတယ်။
အလေ့အကျင့်ဆိုးများ – ကိုယ်နေဟန်ထားမပြောင်းဘဲ အချိန်ကြာထိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အိပ်စက်ပုံစံအနေအထား မမှန်ခြင်း။
ရုတ်တရတ်ထိခိုက်မှု – ကားမတော်တဆမှု၊ အားကစားများ။
Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါအခြေအနေမေးမြန်းမှုများ၊ စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုတိကျသောအဖြေအတွက် ဓါတ်မှန်၊ စီတီစကမ်၊ အမ်အာအမ် ကဲ့သို့ ပုံရိပ်ရိုက်ယူစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေဟာ သင့်နာကျင်မှုအတွက် အကြောင်းအရင်းရှာဖို့ အကောင်းဆုံးစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တယ်။ အာရုံကြောထိခိုက်မှုကြောင့်ဟုထင်ပါက EMG ရိုက်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဇက်နာစေနိုင်သော သို့မဟုတ် ပိုဆိုးစေနိုင်သော ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းများ၊ ရောင်ရမ်းမှုများကို သေချာသိရှိရန် သွေးစစ်ဆေးမှုများလည်း ပြုလုပ်ကောင်းပြုလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
Stiff Neck (ဇက်နာခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မပြင်းထန်သောနာကျင်မှုမျိုးမှာ နှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်လောက် ဂရုစိုက်လိုက်ပါက သက်သာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့မသက်သာပါက ဆရာဝန်မှ တခြားဆေးများ ( စတီးရွိုက်ထိုးခြင်း၊ ကြွက်သားလျော့ဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး) ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ လျှပ်စစ်ဖြင့်နှိပ်ခြင်းများ၊ နောက်ဆုံး ခွဲစိတ်မှုထိလမ်းညွှန်နိုင်ပါတယ်။
အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ မှီဝဲနိုင်ပါတယ်။
ပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းရေခဲကပ်ပြီး နောက်ရက်များမှာ ရေနွေးအိတ်ကပ်ခြင်း၊ ရေနွေးဖြင့်ရေချိုးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံစံမှန်မှန်နေပြီး၊ ကိုယ်နေဟန်ထားမကြာခဏ ပြောင်းလဲပေးသင့်ပါတယ်။
သိလိုသည်များရှိပါက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေရရန် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ။်
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/neck-pain/basics/treatment/con-20028772. Accessed September 25, 2016.
http://www.healthline.com/health/neck-pain#Treatments4. Accessed September 25, 2016.